maxamedsheekafguun Maajo 31, 2021 waxbarasho
1. Dad qaarkii waxay ka qeybgalaan aaska markuu qof ehel ah geeriyoodo iyagoo muujinaya qiiro iyo inay daneyn jireen, laakiin ma daryeeli jirin kamana warqabi jirin inti uu noolaa.
4. Qof kasta qalad ayuu sameeyaa nolosha, laakiin taasi macnaheedu maaha inay naftooda u ciqaabaan. mararka qaar dad wanaagsan ayaa sameeya doorasho xun, micnaheedu maaha in ay xun yihiin. micnaheedu waa in ay bini’aadan yihin.
7. Xabsiga ugu weyn ay dadka ku noolaadaan, waa cabsida iyo ka welwelida waxa dadka kale ka aaminsan yihiin.
Qormadan qodobkee ku cajabiyay akhristow